Khuseeya: Live Farsamada sirdoonka Emailka | Martech Zone
Khuseeya: Live Teknolojiyada sirdoonka Emailka
Khamiis, Janaayo 21, 2016 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Warshadaha iimaylka waxa ay leeyihiin laba dhibaato oo waaweyn oo ah adeegsigeeda joogtada ah ee dirista tirada badan:
waxkabadalka - U dirista fariin isku mid ah, isla mar ahaantaana, dhamaan macaamiisha emailkaaga mahelaysid farriinta saxda ah waqtiga saxda ah qofka aad heleyso Muxuu Marianne, 24 sano jir, u helayaa dalabyo la mid ah kii Michael, 57 sano jir, markay xiiseynayaan waxyaabo aad u kala duwan? Maaddaama qaata kasta uu gaar yahay, sidaas oo kale farriin waliba waa inay noqotaa. Emailada shaqsiyadeed waxay keeneysaa lix jeer sicirka macaamilka, laakiin 70% noocyada ayaa ku guuldareystay inay u adeegsadaan iyaga sida ku cad MarketingLand.
Attention -Waqtigu waa dhibka kale ee boostada tirada badan. Xataa haddii waxa ku jira iimaylka uu yahay mid shaqsiyeeyay, dhammaan iimaylada waxa loo soo diraa isku wakhti qaataha kasta. Tani waa inkasta oo macaamiishu uu leeyahay qaab nololeed, caadooyin, ama xitaa waqtiyo kala duwan. Adigoo soo diraya isla wakhtigaas, shirkadu waxay si lama filaan ah u waayi doontaa dad badan oo laga yaabo inay xiisaynayeen dalabka laakiin ka helay meel ka baxsan daaqada hawlgelinta.
Dirista wakhtga wanajinta waxay keeni kartaa 22% horumar ku ah ka qayb qaadashada iimaylka.
Suuqgeynta Emailka ayaa wali ah kanaalada ugu jecel ee ay ku taxan yihiin macaamiisha si ay uga helaan dallacsiinta noocyada ay jecel yihiin. Shirkaduhu way ogyihiin sidaa darteed inay sii diraan emayl badan laakiin tartanka sanduuqa ayaa maalin walba sii xumaanaya, la'aanta ku xirnaanshaha emayllada ayaa dhab ahaantii dhaawaceysa soo noqoshada maalgashiga noocyada diraya.
Xallinta Dhibaatada Boostada Dadku
Suuqyayaashu waxay isku dayeen inay shakhsiyeeyaan ololahooda suuqgeynta emaylka iyagoo si fudud u gelinaya magacyada ugu horreeya ee macaamiisha farriinta ama qadka maadada. Fikradda halkaan ka jirtay waxay ahayd in qofka qaata la dareensiiyo in e-maylka la diyaariyey oo loo soo diray isaga / iyada oo keliya. Si kastaba ha noqotee, dadka qaata looma khiyaaneeyo si fudud… gaar ahaan marka waxyaabaha ku jira e-maylka aan loogu talagalin iyaga.
Suuqyayaashu waxay xog badan ka hayaan macmiil kasta maanta marka loo eego intii ay waligood lahaayeen. Nasiib darrose, iyagu ma yaqaaniin sida si buuxda loogu adeegsado ama waxay leeyihiin qalab awood badan u leh in laga faa'iideysto. Waxaa laga yaabaa in arrintu aysan ahayn suuqgeyaal, waxay ahayd inay jiraan oo keliya meheradaha emailka caadiga ah ee la heli karo. Khuseeya waxay soo saartay badeecad awood leh, laakiin dareen leh oo u oggolaaneysa kooxaha suuq-geynta inay adeegsadaan xogtaan si ay ugu diraan emayllada saxda ah, waqtiga saxda ah, ee macmiil kasta.
Khuseeya waa teknolojiyad sirdoon oo elektiroonig ah oo toos ah oo falanqeysa macnaha guud ee furitaanka iyo dabeecadda qof kasta oo qaata si uu u gaarsiiyo farriinta waqtiga ugu fiican uguna muujiyo waxyaabaha ugu habboon waqtiga-dhabta ah.
Furitaan kasta oo emaylka ah, wuxuu khuseeyaa wuxuu isbeddelaa nuxurka farriinta waqtiga dhabta ah ee qaata kasta iyadoo kuxiran aaladda, goobta, iyo jawiga goobta iyo waqtiga la siiyay. Websaytka elektaroonigga ah ee ganacsiga e-commerce, tusaale ahaan, waxay awood u yeelan doontaa inay abaabusho ololaheeda si ay u soo bandhigto jaakadaha roobka iyo surwaalka haddii ay da'ayaan marka qofka loo soo dirayo uu furayo emaylka, iyo funaanado iyo gaagaab haddii ay qoraxdu tahay marka qofka qaata uu mar kale furo emailkan.
Reelevant waxay ka muuqataa boostada tirada badan adoo si otomaatig ah ugu diraya emayl wakhtiyo kala duwan macaamiil kasta. Si loo aqoonsado waqtiga ugu fiican ee lala falgalo mid kasta oo ka mid ah, algorithms-ka barxadda ayaa lagu falanqeeyaa dhaqankooda iyo dhaqankooda email kasta oo ay helaan. Emailada badan ee la soo diro, ayaa si caqligal ah u codsanaya.
Daah-: Martech Zone waxa uu isticmaalayaa isku xidhka xidhiidhka ee maqaalkan.
Tags: jiididda iyo dhibicjiid oo hoos u dhig email-dhisenuxurka firfircoonshaqsiyeynta emaylkaemail dir waqtigashakhsi ahaaneeddib u khuseeyawaqti dirdir waqti hagaajinta
CloudCraze: Nidaamka Ecommerce ee Loo Dhisay Iibka